Izinto eziHlanu (5) zeempawu ezinophawu lwentsingiselo | Iimpawu kunye neentsingiselo - Iintsingiselo Iintsingiselo
Iintsingiselo Zekhadi Letarot
Izinto ezintlanu zoMfuziselo kunye nentsingiselo
Uhlobo lweelwimi ezingumfuziselo kukuba kufuneka, zifuneke, zibambe zonke iikona zendalo kwaye zibophe ubomi kwisakhelo. Igama elithi isimboli livela kumagama amabini esiGrike athi endaweni yokungathobeki kuthetha 'ukuphosa kunye.'
Ukusuka koku sifumana inkcazo ephezulu yeWebster ethi uphawu luphakamisa okanye lumele enye into. Kule meko sinyonyobela ikhethini elibomvu lembali (shhh sukuxela) kumathambo angenanto eZinto eziHlanu eziNgcwele.
La mandla-oMhlaba, woMoya, woMlilo, waManzi kunye noMoya- 'aphosa kunye' yonke indalo. Leyo yinto enye yesaladi yendaleko, kwaye ichaphazele ukutshintsha komntu ukusukela ekuqaleni kwexesha.
Ke uqala phi? Cofa imifanekiso okanye izihloko ezingezantsi ukuze ufunde malunga neesimboli kunye neentsingiselo zento nganye kwezi-5. Skrolela ezantsi ukuze ufunde konke malunga nezinto ezintlanu kunye nendlela yokuzibhenela xa usenza amasiko, imithandazo kunye nokucamngca.
Izinto eziMhlaba eziSimboli kunye neentsingiselo
Element yomoya Isimboli kunye neentsingiselo
Element yoMlilo Isimboli kunye neentsingiselo
Element Symbolism kunye neentsingiselo
Umoya okanye iAether Element Symbolism kunye neentsingiselo
AmaGrike, ahlala ethambisa ifilosofi, ayephakathi kwenye yempucuko enkulu yokubeka amandla oMbane kumxholo osebenzayo.
Ngombulelo awuyi kufuna ukukhupha i-toga yakho ukuze uqonde izinto ezisisiseko (ngaphandle kokuba ufuna-kwimeko enjalo, silindele isimemo).
Ngokufanelekileyo babhala oko Umhlaba , Umoya , Umlilo , Amanzi kwaye I-Aether (uMoya okanye iQuintessence) yenza yonke into esehlabathini. Iingcali zeAlchemists zelo xesha emva koko zenze iisimboli ezine zoonxantathu ukumela konke ngaphandle koMoya, ifomu yayo ihlala ingafumaneki nakuko konke ubuchwephesha beeteknoloji.
umbala we-indigo umele ntoni
Sebenzisa imodeli yesiGrike, Umhlaba zezona zinto zibalulekileyo neziphambeneyo. Masijongane nayo - iliwa lilitye kwaye lilungile ngokuthe ngqo (ngaphandle kokuba uthetha ngekristali ezihlawuliswe ngokwasemoyeni, kodwa sisihloko selinye inqaku).
Nangona kunjalo ngaphandle kweli litye lembombo izinto eziseleyo azinakusebenza. Cinga ukuba iatmosfera yoMhlaba yeyona nto isinika umoya, ukutya, amanzi aphilileyo, njl. Thatha loo nto kwaye umfanekiso oseleyo mhle kakhulu.
Amanzi yinto elandelayo, elandelwa ngu Umoya kwaye Umlilo , ekwakheni incopho ecokisekileyo yoMoya esebenza njengeyona nxalenye yeli theko lobugqi.
Kwiinkcubeko ezininzi zokufunda ukufunda ukuphatha ngaphezulu kwento enye okanye nangaphezulu kuyinxalenye yoqeqesho lwakudala, kodwa ukuze uqonde nantoni na kufuneka uyihloniphe kwaye okwesibini uqonde zonke iinkalo zayo ezahlukeneyo.
Ukuba iMedicine Man ithi awukulungelanga ukudlala ngomlilo - MAMELA okanye umoya woMlilo uyakukufundisa ngendlela enzima.
Ukuthatha eli nyathelo uqhubele phambili, konke izilwanyana , izityalo , ziikristale , ngeenkwenkwezi kunye neempawu zodiac , amanani , imibala , izikhokelo njl njl banembalelwano eyabelwe bona.
Eyona nto inokutshintsha ukusuka kwinkcubeko iye kwinkcubeko (ngakumbi apho inkqubo yezinto yahlukile kunesiko laseNtshona) kodwa ipateni ihleli. Intlanzi, i-Iris, i-Aquamarine, uphawu lweCancer, ulwalathiso oluphambili lwaseNtshona, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nenombolo 2 zonke zilungelelaniswe naManzi, umzekelo.
Ngokuthelekisa Amanani amaTshayina Ithi 1 linani lamanzi kwaye lihlala eMpuma.
Ngaba uziva uhlanjiwe ngawo wonke lo mahluko? Joyina abanye abaninzi abafuna.
Isimboli yentsingiselo kunye nentsingiselo inokudideka ngokukhawuleza okukhulu, kwaye siza kongeza eludakeni (ukulwa nabani na?).
Kwi UTaoism izinto ezi-5 nganye inempawu zesilisa okanye zowasetyhini, kwaye nganye ilawula amalungu omzimba ahlukeneyo (uninzi lwalo mfuziselo ugalela kwi-Acupuncture nakwizinto ezifanayo).
Izinto zabo ziinkuni, umlilo, umhlaba, isinyithi kunye namanzi. Ezi zinto zi-5 zikwachaphazela i-horoscope yomntu kwi I-Chinese Astrology kunye ne-Chinese Zodiac .
Xa ii-Element zilungelelaniswe ngokufanelekileyo amandla obomi (Chi) ahamba ngokuqinisekileyo. Xa zikhutshiwe loo mlambo uhamba uyokuhinky ushiya umntu eziva engavumelani emzimbeni, engqondweni okanye emoyeni (okanye zontathu!).
UPlato noAristotle babe nemibono yabo yokongeza kumxube. UPlato ubangelwe nguMlilo, umoya kunye namanzi ngokunyakaza kunye noMhlaba ngokuzola.
UAristotle Yathi uMhlaba ngowasetyhini kunye nexesha lekwindla, Umlilo wawuyindoda-ihlobo, Umoya wawuyindoda-intwasahlobo kwaye Amanzi ayengowasetyhini kunye nobusika.
Ngokwenyani unokuchitha lonke ixesha lokufunda ufunda ngumahluko owahlukileyo kwi-Elemental Symbolism.
Sisiqwenga esifanelekileyo sophando esixelela okuninzi malunga neenkcubeko ezahlukeneyo, iinkcubeko kunye nendlela abantu abanxibelelana ngayo nehlabathi. Kodwa loo nto iyodwa ayisombululi ukuba ungasifaka njani isimboli esivela kwiloft yakho yasezidolophini, kwi-condo okanye ekunyukeni okuphezulu (hey, siyayibona indlu yethu apho!) Nokuba abo banethamsanqa ngokwaneleyo lokuhlala kuseto lwelizwe abanakukwazi ukudibana ngokupheleleyo neentsingiselo zoQalo.
Ukubiza izinto ezi-5
Ukusetyenziswa okunokubakho kwimetaphysical yesimboli yesimboli kukhulu njengokucinga kwakho!
Mhlawumbi uya kusihombisa isibingelelo sakho saseNtwasahlobo nge iseti yamatye Inxulunyaniswa nento yomoya (imizekelo ibandakanya Ilitye , Cacisa iFluorite kunye neTopazi).
Okanye, xa ubeka ndawonye i-sachet yothando ungaguqukela kwizinto 'ezijolise kuMlilo' ezibonakalisa iintlantsi zobomi bokulala ngesondo.
Phonsa isangqa usebenzisa iipalali zokuqala uhloniphe iindlela ezine. Yenza inkqubo yokuvumisa ngamatye okanye kwizityalo usebenzisa iimpawu ezisisiseko zexabiso lokutolika.
Fumana izaleko ze iintsingiselo kumaphupha akho ngokujonga ubukho be-elemental (njengokuva ukubhudlwa ngumoya, umlambo otshabalalayo, i-oki edlamkileyo okanye ukubona umlilo weziko).
Khumbula ukuba njengenye iisimboli neentsingiselo sibonelela apha, asazi wena buqu. Amava obomi asinika unxibelelwano oluninzi kakhulu phakathi kwezinto ezibonakala zingadibani. Olo nxibelelwano luba ziimpawu zomntu kunye neempawu ezihlala nawe ebomini bakho bonke.
Kweminye i-Element yaManzi ingamandla kwaye iyakhuthaza. Kwabanye lutshaba oloyikisayo abaya kuluthintela kwangexesha lokuhlamba (buza nje nawuphi na oneminyaka emi-2 ubudala).
Ithetha ukuthini le nto kutoliko olusebenzayo IMIBA ebalulekileyo. Iingcali ze-101 ze-metaphysical azinakukhala oko uzive kuqala, kunye nendlela oyiguqulela ngayo kumlingo.
Kwinqaku lokugqibela, ubudlelwane obakhayo kunye namaQumrhu aQalayo atshintsha ngeNdlela yakho kunye nokukhula kwakho ngokomoya. Ivili lihlala lijika-jika, kwaye inguqu iqinisekile njengerhafu (ngaphandle kokuba umntu uyema aze abaleke).
Le ntshukumo ikwangulo owenza ukholo lube ngumceli mngeni- ikukhuthaza ukuba uye phambili kuzo zonke izinto eziya kuMoya; ngokubangoyena mntu ubalaseleyo onokuba nguye.
Umhla iinkolelo zakho azinakho ukuvuka, kwaye lixesha lokuba uphakame uye kwelinye icala.
Izinto ezi-5 zoNxibelelwano lweMetaphysical
Kwi-Daily Horoscope Astros siqokelele ulwazi malunga nembalelwano ebandakanya Imibala , Amaxesha onyaka, Amanani , Ukuvumisa, Astrology kunye neZodiac Signs , Ukutolikwa kwephupha , Thixo, Ukuphilisa Amakristali kunye nokusetyenziswa kwemetaphysical.
Ukuhlola kwethu kuyaqhubeka, kodwa amacandelo ezinto nganye akunika indawo yokuqala.
umhlaza oyindoda kunye ne-taurus yowesifazane ebhedini
Imeko yokomoya ayilulo ugqatso- akufuneki ukuba ukhawuleze ijika lakho lokufunda. Yazi amandla enye yentsusa ngexesha, sebenza nayo, yazi indlela ebuchaphazela ngayo ubomi bakho bemihla ngemihla kwaye uphambi komdlalo!
Unyaka weRat ebizwa ngokuba yiTshizi eNkulu yeZodiac yaseTshayina
Ukuhambelana kweLibra kunye neScorpio: Ubuhlobo, isondo kunye nothando
I-Numerology 22: INombolo ye-Master yeNombolo ye-22 yeNdlela yoBomi, ukuhambelana, kunye neentsingiselo zekamva
I-Horoscope kunye neZodiac Signs ukuhambelana
taurus kunye taurus kubudlelwane
Scorpio indoda virgo umfazi ebhedini
umhlaza indoda kunye nomhlaza umfazi ukuthandana
Ukuhambelana kwegemini kunye neepisces ebhedini